Eyona midlalo ilungileyo ka-2016 ye-Android, ngokweGoogle | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Iiselfowuni, amacwecwe
Kwinqaku lam elidlulileyo, ndikubonise ezonaapp zingcono ze-2016 ze-Android, ngokweGoogle. Phakathi kwazo zonke izicelo ezintsha eziye zafikelela kwiVenkile yeGoogle Play, abafana abavela kwiNtaba yokujonga baqaqambisa iPrisma. Kwinqanaba leyona midlalo ilungileyo ka-2016 ye-Android, usetyenziso olubonisiweyo nguClash Royale, Isicelo esikwazileyo ukubamba phantse wonke umntu, nokuba ungakanani na ngokweminyaka kwaye sibe yimpumelelo efanayo naleyo yePokémon GO. Apha ngezantsi sikubonisa udidi olwenziwe nguGoogle, udidi oluqulathe la macandelo alandelayo: ukhuphiswano, ubuchule, imidlalo evela kubaphuhlisi abazimeleyo, ezona zikhutshelweyo, ezona zivuselelayo, ezona zingenakuphikiswa, ezona zinto zibonwa kakuhle kunye nosapho oluhle.
1 Eyona midlalo ikhuphisanayo ka-2016
2 Eyona midlalo iqulunqwayo yango-2016
3 Eyona midlalo ilungileyo ye-indie ka-2016
4 Eyona midlalo ikhutshelweyo yango-2016
5 Eyona midlalo icelomngeni ka-2016
6 Eyona midlalo ingenakuphikiswa ka-2016
7 Eyona midlalo ibonakalayo ye-2016
8 Eyona midlalo mihle yentsapho yango-2016
Eyona midlalo ikhuphisanayo ka-2016
Ibhola ekhatywayo yeFIFA.
Danisa nje ngoku.
Eyona midlalo iqulunqwayo yango-2016
Eyona midlalo ilungileyo ye-indie ka-2016
Ungaze Wedwa: Ushicilelo lweKi.
IVlogger Yiya kwintsholongwane.
Eyona midlalo ikhutshelweyo yango-2016
IiFama zamaFama Super Saga.
Eyona midlalo icelomngeni ka-2016
Iimfazwe zeNkwenkwezi: iGallaxy yamaGorha.
Ukuvutha kweNinja yokugqibela.
Umdyarho we-CSR 2.
Ilizwe leShark elilambileyo.
Eyona midlalo ingenakuphikiswa ka-2016
Ukuthetha uTom: Yiya kwigolide!
Iigadi zegadi-iiNew Acres.
Ukunyuka kwe-MMX Hill.
Eyona midlalo ibonakalayo ye-2016
IMFIHLELO YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA.
Ikati ePhantom enkulu.
Eyona midlalo mihle yentsapho yango-2016
I-Disney Magik yoBukumkani.
Imvelaphi yegama lokuqala Roblox.
Ngale khonkco ilandelayo unokufikelela ngokuthe ngqo kwicandelo apho uGoogle aqulunqe yonke eyona midlalo ilungileyo ka-2016 nalapho unokukhuphela khona ngokuthe ngqo. Ngaba uyavumelana nolu luhlu? Ngaba ucinga ukuba ilahlekile okanye malunga nomdlalo? Sishiyele olakho uluvo kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Eyona midlalo ilungileyo ka-2016 ye-Android, ngokweGoogle